"Alice muWonderland." Asina kunzwisiswa Lewis Carroll classic. | Zvazvino Zvinyorwa
Kunyangwe ane mukurumbira, Alice muWonderland iri bhukukunyangwe kusanzwisiswa. Zvagara zvakadaro kubvira pakaburitswa muna 1865 nenyanzvi yemasvomhu yeChirungu, logician, mutori wemifananidzo uye munyori. Lewis Carroll, ane zita chairo ainzi Charles Lutwidge Dodgson. Carroll anga asingatombozvifungidzira kuti zviitiko zve change ego Basa rekunyora raAlicia Liddell, musikana waakafemerwa kuti agadzire protagonist yake, aipedzisira afarira mukurumbira wakadai.
Kana paine chimwe chinhu chakanaka pamusoro penyaya iyi, ndeyekuti, sezvatichaona pazasi, vana nevakuru vanogona kunakidzwa nazvo. Shure kwezvose, Alice muWonderland haisi imwe yengano dzechokwadi dzekufungidzira kunze uko - uye chaizvo nokusashuva kuva kupfuura zvaari, anokwanisa kuva kupfuura zvaanoratidzika-, asiwo imwe yeakanakisa enganonyorwa ayo mabhuku easina musoro akaburitsa.
1 Icho chiri chekuti hapana munhu ari kuzofunga nezve vana?
2 Kukosha kwemutauro
3 Kudzikira pasi paburi retsuro
Icho chiri chekuti hapana munhu ari kuzofunga nezve vana?
"Uye hunhu hwenyaya iyi ndi… Wow, ndakanganwa!"
"Zvimwe handina hunhu," Alicia akashinga kucherechedza.
"Ehe zvine hunhu!" Vakadaidzira maDuchess. Zvese zvine mutsika, nyaya yacho ndeyekuiwana.
Pakati pekushoropodzwa kukuru kwaakagamuchira Alice muWondlands, kunyanya panguva yekubudiswa kwayo, tinoona izvozvo haina tsika. Iyo ngano pamberi payo nguva, isina mweya unonetesa mutsika wedzimwe ngano.. Iyo yemaitiro haina kumisikidzwa nemunyori, asi imwe neimwe inogona kuwana imwe yakasiyana pakati pemapeji ayo.
Iyi tsika yetsika inomutendera kuti ape mamiriro asina musoro, ehutsinye, uye asina musoro pasina chero kunetseka. Hapana kana mumwe wavo anotarisira kudzidzisa Alice chidzidzo, chete muite kuti apokana kuti chii kusvika panguva iyoyo akafunga "chokwadi" uye "pfungwa."
"Unoreva kuti unogona kuwana mhinduro yechirahwe?" Yakadaro Hare yekwaMarch.
"Chaizvoizvo," Alicia akapindura.
"Kana zvakadaro, unofanira kutaura zvaunofunga," Hare akasimbirira.
"Ndo zvandiri kuita," Alicia akapindura, "kana zvirinani ndinoreva zvandiri kutaura, zvinova zvakafanana chinhu chimwe chete."
"Zvingave zvakafanana sei?" Akadeedzera Ruvengo. Zvakafanana here kuti "Ndinoona zvandinodya" sekuti "Ini ndinodya zvandinoona"?
"Zvingave zvakafanana sei!" Yakaimba iyo Kurume Hare. Zvakafanana here kuti "Ndinoda zvandinazvo" uye "ndine zvandinoda"?
Zviripachena, nguva pfupi mushure mekunge tamboverenga bhuku, kuti Lewis Carroll anonamira kukosha kukuru kumutauro. Ruzhinji rwemakomiki, uye kwete rwekuseka, mamiriro ezvinhu anokura mairi mhedzisiro ye Mitambo yezwi kana of kusanzwisisana kwemitauro.
Nekuda kweizvi, vanyori vazhinji vanga vachida kuona muna Carroll mutangiri wemuzivi Wittgenstein, kunyanya zvine chekuita nedzidziso yake yesomorphism kana "kuzivikanwa pakati pemutauro uye chokwadi." Kune rimwe divi, chirevo chake chakakurumbira "zvese zvinogona kutaurwa zvinogona kutaurwa zvakajeka; uye izvo zvisingataurike nezvazvo, zvirinani kuvhara », kubva Tractatus Logico-Philosophicus, inoiswa mundima zhinji dzenhoroondo.
Iyo yekunyemwerera kwechiratidzo cheCheshire Cat, imwe yeanonyanya kuzivikanwa sekondari ye Alice muWonderland.
Kudzikira pasi paburi retsuro
"Zvakanaka, anonoka mazuva maviri!" Iye Hatter akatura befu. Ndatokuudza kuti bota harishande! Akawedzera, akatarisa kuna Hare.
- Uye izvo zvaive kubva ku mejor mhando, 'akadaro Hare akazvidemba.
"Chokwadi, asi bhotoro rinofanira kunge rakawana zvimedu," rakapopota Mhodzi; Iwe haufanire kunge wakazora wachi neanga rechingwa.
Iyo yaMarch Hare yakatora wachi, ndokuiongorora nekushushikana kwakakomba, ndokuipinza vachidemba mukati teacup; Ipapo akaiongorora zvakare, asi hapana chimwe chaaifunga chiri nani pane kudzokorora zvaakange ambotaura:
"Yaiva bhata kubva ku mejor mhando!
Zvikonzero zvakawanda zvinogona kupihwa nei Alice muWondlands nyaya yakanaka, asi ini ndichavhara nezviri pachena pane zvese: zvinonakidza. Iyo inyaya isingambobowa, iyo inoshamisika, uye iri kusimuka kusvika kumagumo ayo. Nguva zhinji tinokanganwa kuti chikonzero chikuru chekuverenga bhuku ndechekuti chinonakidza, chimwe chinhu chinotiyeuchidza, uye kupfuura kubudirira, basa raCarroll.
Izvo pakutanga kuona zvinoita senge nyaya yevana ine nyaya inonakidza. Asi ngatirege kunyengerwa: inyaya yevana. Kunyangwe izvi zvisingareve kuti vanhu vakuru havakwanise kunakidzwa nazvo, kubvira Mukuvimbika kwake kunogara simba rake nerunako rwake. Nietzsche akati "kune mweya inosvibisa mvura yayo kuti iite seyakadzika." Kana iri Alice muWonderland zvakapesana chete: sekutarisa pasi perwizi, pamwe zvisina musoro uye zvisina musoro, asi zviri pachena.
"Haa mania yekukakavara vese vanotsoropodza ava!" Alicia akagunun'una. Izvo ndezvekuti vanomupengesa! […] Hapana… hazvina basa kutaura naye! Alicia aitaura achipererwa. Iye akakwana dhongi!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fantasy » "Alice muWonderland." Asina kunzwisiswa Lewis Carroll classic.